Labo uhlela ukuba uchithe amaholidi ngasolwandle, ukuze bathuthukise impilo yabo futhi athole amandla, ukuphumula ophelele Krasnodar esifundeni. Amahhotela nazi ezihlukahlukene intengo izigaba futhi isikulungele ukuthola izivakashi nanoma iyiphi imali engenayo. Lona omunye ezifundeni ezicebile enhle kakhulu Russian. yokuhlala ezifakiwe zokungcebeleka yesifunda akuyona kuphela ithuba elikhulu yokuthamela ilanga endaweni ethile e-Sochi noma Yeisk, inala emanzini olwandle, kodwa futhi ukuba bajwayelane izikhumbuzo zomlando eziningi.
Anapa, Tuapse, Gelendzhik ... Lezi zokungcebeleka ukunikela amakhilomitha amaningi amabhishi, izindawo ezithakazelisayo for izintaba, diving nobuhle elithakazelisayo yokuqala ubunjalo ezizungezile. Amaholide ehlangana impilo nokuphila kahle ukwelashwa, asebenzisa amanzi emithonjeni amaminerali kanye, yebo, udaka ekwelapheni, okuyiwona eziningi beze e Krasnodar esifundeni.
Amahhotela "zonke okufakayo"
Zonke umqondo okufakayo izindawo zethu zokulala - sekwadlula ngokulinganiswa ayemncane. Abanikazi ehhotela ibhizinisi wasemakhishini bakwamukela kusukela nozakwabo bakwamanye amazwe. Nokho, amaRashiya kahle le sevisi, ngakho ngiyazisa eza Krasnodar, amahhotela "zonke okufakayo". Amahhotela Coastal esifundeni ikakhulukazi ukusebenza ngokuqondile kulo mqondo.
Izivakashi bakhangwa yokuthi lonke uhla ezihlinzekwa ihhotela ziyatholakala olulodwa, intengo kusengaphambili. Lokhu kusho ukuthi umphakathi ukuchitha iholide lakho lonke, ekhokhela kuyo ekuqaleni, ukuvakasha, futhi ayisekho ukuchitha lutho ngesikhathi sonke iholide ngenani ukudla kanye nokuzijabulisa.
Lolu khetho, ngokusho eziningi, ikhuthaza ukonga futhi inikeza ithuba ngenkokhelo elincane bazijabulise olwandle. Kuyiqiniso ukuthi labo efika e Yerevan amahhotela "zonke okufakayo" sipho kuphela amasevisi standard, kanye nomaphi emhlabeni, zokuzijabulisa eyengeziwe bese ekukhokhela. Kodwa abaningi iphakethe zonke okufakayo banelisekile nje impela.
Thanda zokungcebeleka eziningi kule ndawo, njengoba Krasnodar, amahhotela "zonke okufakayo" ezakha share sengonyama of the stock izindlu. Amahhotela ezisebenza ngaphansi lo mqondo, babe "stardom" yabo, isigaba okuyinto linendima ebalulekile. Ayanda isimo isikhungo ethize, aba maningi inkonzo ukuthini umqondo wazo zonke kukonke.
Emahhotela aphambili e abasebenza uhlelo esinjalo, Krasnodar Territory, ukuhlinzeka khulula massage amasevisi, yokupaka ephephile, iziphuzo wendawo angenamkhawulo in imigoqo, swimming pool nokunye. D. Iningi lalaba bantu lihlale amahhotela ngezindleko zabo ukuhlela Shuttle kusuka esikhumulweni sezindiza / sesitimela esiteshini. Kodwa lonke iphakethe itholakala uma izivakashi ukhetha ezibizayo - emahhotela aphambili e Krasnodar esifundeni, ezifana "Deauville" futhi "Almira" Anapa "Prometheus Club" ku Lazarev (Sochi) kanye nabanye abaningi.
Ngo esifundeni kukhona inala amahhotela ezisebenza ngaphansi "zonke okufakayo" - kusuka eliphansi ukuze okunethezeka. Njalo izivakashi ofuna ukujabulela konke nalokho athokoza ngakho iholide olwandle iphakethe ephelele amasevisi ikhokhwe, ekhetha ukuhlala lapho ayekhona, kuye ngokuthi ibhajethi iholide.
Amahhotela e Krasnodar Krai isigaba "5 izinkanyezi" ngokuvamile izakhiwo ezinkulu ehhotela. Anikeza anhlobonhlobo Izinsiza eziyisisekelo futhi namasevisi angeziwe. Abasebenzi e abaningi babo ngokukhethekile abaqeqeshiwe sasizwa esiphezulu futhi ukuzibamba.
Ngokuvamile aphambili amahhotela ugu lweNyakatho Krasnodar esifundeni babe kwingqalasizinda zabo, nemishayo eziningana futhi izindawo zokudla, izitolo kanye ngisho kuma-nightclub. Ukuthuthukiswa Kangaka Ukusebenzelana endaweni spa. Imfanelo okuphoqelekile kukhona amachibi.
Okudingekayo ukuze izinombolo
Amakamelo okulala awabange emahhotela aphambili yesifunda uyaqiniseka ukuthi ezinkulu (hhayi ngaphansi kuka amabili nanhlanu square metres) igumbi, ngezinye izikhathi - lokulala kanye negumbi lokuhlala, kuncike ngezinga elithile. Amakamelo kumele abe okugeza kanye eshaweni, yangasese (ngezinye izikhathi ezimbili), a bidet. The closet kuyadingeka ukuba bathrobes futhi Slippers.
Olele, njengoba umthetho, it imelelwa embhedeni okufushane double we eliyidabuli noma elikabili. Amashidi ku amahhotela aphambili ngempela kwenzeka nsukuzonke.
Ensimini ka Krasnodar esifundeni zitholakala ezifana hotel chains adumile njengo "Kempinski Grand" (Gelendzhik), "Pullman Sochi Centre" kanye Radisson Blu eliyiPharadesi e Sochi, kanye ehhotela grand "Valentine" e Anapa.
Abaningi babo zitholakala ku Sochi, okuyinto muva isingathwe Olympics. Isilinganiselwa Ihhotela ihlanganiswe asekelwe lobuya beshiya isiminyaminya nesiphithiphithi sasemadolobheni futhi kucatshangelwa ukubukwa ka kongoti bolwazi emkhakheni wezokuvakasha. Njengoba Sochi - idolobha resort, inzuzo enkulu ngenxa hhotela isondele kolwandle, ubumsulwa ebhishi eliseduze, futhi khona ensimini ka amachibi ongaphandle.
Esinye sezipho ezinhle kakhulu kubhekwa "Hyatt Regency Sochi", etholakala esifundeni esimaphakathi, ngaphakathi ukuhamba ibanga ezikhangayo eziningi zendawo zemicimbi. Ihhotela umthangalasisekelo ocebile, kukhona izindawo zokudla, ichibi ongaphandle nekhulu ayisishiyagalolunye nesishiyagalombili amakamelo lwezigaba ezahlukene.
Enye ehhotela - Pullman Sochi Centre - inikeza isikhungo Wellness, batholakala esitezi nesithupha, Fit & Spa Lounge, sauna, Hammam, amasevisi massage and yokwelapha aziphumulele. Ihhotela itholakala ukuphila kube uhambo olufushane kolwandle. Ngokulinganayo ethandwa phakathi baseRussia Swissôtel kuyona Sochi Kamelia, "Radisson Blu ePharadesi Resort & Spa" futhi "Homeland Grand".
Ziziningi ikakhulukazi Adler. Cishe zonke mini-amahhotela of Krasnodar esifundeni zimi kahle zilungele ukuphumula bese ejabulela ikhefu okuphumuzayo. Ngokuvamile, ukuthi akuphi ngaphakathi ukuhamba ibanga kusuka kolwandle, ngokuvamile ngisho phezu komugqa wokuqala. Amahhotela okunjalo izici esimweni ekhethekile ekhaya induduzo. Inani elincane Igumbi kukhawulela inani izivakashi, ngakho ngokuvamile pre-yokubhuka izivakashi kubaluleke kakhulu.
Ngokwesibonelo, mini-amahhotela Adler ngokuvamile nomkhawulo amakamelo amabili abe ikhishi elincane futhi ebhukwini esiphikisayo. Abaningi babo - ihhotela "uKristina", "Irena", "Bliss House," "Camille", njll - kukhona ngaphakathi ukuhamba ibanga kusuka ukuzijabulisa eyinhloko resort. Izakhamuzi kungaba e Ngemizuzwana ukuya aquarium amanzi ipaki. Ngokusondelene nalezi-amahhotela mini zihlale eziningi ezitolo ezincane, amathilomu nezindawo zokudlela.
Omunye eqolo Krasnodar Territory kubhekwa Swissôtel kuyona Sochi Kamelia, izindleko umuntu ngamunye ubusuku ngabunye lapho (nge umqondo wegama elithi "zonke okufakayo") iqala ruble eziyisishiyagalombili namakhulu nengxenye. Igumbi in a star hotel amahlanu "Homeland Grand" amabili kungenziwa kwaqashwa yizinkulungwane eziyishumi nanhlanu kuphela. eshibhile kancane nokuba ekilasini efanayo "Hyatt Regency Sochi." Lapha yokuhlala yesidlo kubiza ruble engaba mihlanu eziyinkulungwane nengxenye.
Four Star Amahhotela e Krasnodar Krai nge pool spa izindawo, ezifana "Marins Park Hotel" noma "Iparele" ngo Sochi, usethe ephansi intengo ezingeni - ezinhlanu futhi ezintathu nengxenye ruble ayizigidi ngokulandelana umuntu ngamunye ngosuku futhi uhlale umqondo wegama elithi "zonke obandakanya wonke umuntu ".
Izindleko abahlala emahhotela amancane kakhulu ngaphezulu yeningi. Amagumbi kuzo kungaba asuswe ruble emakhulu asibhozo ukuba ibe yizinkulungwane ezintathu. Futhi izindleko ezishibhile kakhulu Krasnodar esifundeni ezindlini ezamukela izihambi. Inani ruble angamakhulu ayisithupha, ungahlala, isibonelo, maphakathi Sochi (nge kwasekuseni).
Ukwahlulela nge okuvelayo zalabo abahlala emahhotela aphambili kuleli Krasnodar esifundeni, iningi lazo ziyavumelana isigaba kushiwo. Abaningi wanelisekile olunikezwa umqondo "zonke okufakayo" Iphakheji. Ngokwesibonelo, e-Izibuyekezo mayelana ehhotela "Radisson Blu ePharadesi" futhi kugcizelela ngokufudumele ehlotshisiwe amakamelo ezinkulu, ichibi futhi spa endaweni. Baningi amazwi omuhle wathi mayelana izithombe, ikakhulukazi ezinganeni.
Ihhotela Good, indawo enkulu, abasebenzi friendly futhi ukudla okuhle - ngakho abaseRussia ukukhuluma ngesikhathi lakhe eziyinkimbinkimbi ehhotela "Iparele". Ezinye izivakashi bathi ku Sochi esitobhini best "Marins Park" ngoba kuyinto intengo ezanele hhayi kuphela, kodwa futhi ingqalasizinda ezinhle. AmaRashiya amaningi, le ajwayelekile uchungechunge lwamahhotela, ngakho wayeka ukukhetha ku impahla ecacisiwe.
Ogwini Krasnodar esifundeni eyakhelwe amahhotela eziningi nge isihlabathi, amatshe noma yokufakelwa amabhishi aerosolyary, izihlambi, izinto izikebhe eziqashisayo kanye catamarans. Ngokuza zokungcebeleka kule ndawo yasezulwini, abaningi, nahlulele by ukubuyekezwa, uthole okungcono kakhulu holiday yakho, sijabulela indawo enhle engokwemvelo ogwini Black Sea. Uhlelo service "zonke okufakayo", alinikela emahhotela aphambili e Krasnodar Krai, kwenza izivakashi bakhathazeke ngalutho, futhi umane shí emkhathini zokuzilibazisa ngesikhathi eseholidini.
Uvuko Cathedral of Tutaev: umlando, izakhiwo, umhlobiso ingaphakathi
IKazan Cathedral Petersburg: umlando, isithombe, kanye nekheli. Kuyini ezithakazelisayo iKazan Cathedral (Saint Petersburg)?